बा सँगको यौन सम्पर्क कसरी चुपचाप सहन सकी मेरी दिदीले? - hamro Desh
बा सँगको यौन सम्पर्क कसरी चुपचाप सहन सकी मेरी दिदीले?
ती अपरिचितसँगको सवालले अब आमा द्विविधामा पर्नुभयो। आफूले जन्म दिएकी छोरीलाई पनि अब सँगै राख्न समाजको अनुमति लिनुपर्ने भयो। सायद, आमाको गर्भमा दिदी हुँदा समाजले केही भनेन, जन्मेर हुर्काउँदा पनि केही भनेन। तर जब दिदी र बुबाको सम्वन्धको सवाल उठ्यो तब समाजले बुबालाई होइन दिदीमाथि नै दोष थुपार्न लाग्यो। कस्तो बिडम्बना, अनि सचेत समाजका पनि हामी कति अचेत नागरिक। पीडकलाई दिनु पर्ने दोष र सजायंको भागीदार पनि पीडित नै हुनु पर्ने कस्तो सामाजिक न्याय?
जानुका खतिवडा ज्ञवाली
साभार: कर्णाली खबर
हेर्नुहोस् औलाअनुसार तपाईको स्वभाव कस्तो छ त ?